“आरोही मादेन र उनको काव्यचेत”
१७७५ पटक पढिएको
यो साँझ अरु साँझहरु भन्दा भिन्नछ । रंगिन छ ज्यादा । यो नितान्त भिन्न साँझलाई आफ्नै मनको वर्षात बनेर भिजाइरहेछ । धरानको कुनै एक क्याफेमा ‘आरोही मादेन’ सित छोटो भेटघाट भएको साँचो हो । तर मैले उनलाई सम्पूर्णतामा चिनेछु भन्नु अर्काे झुट हो ।
हामीले त्यो साँझलाई एकछिन भए पनि समातेर राख्नुको पछाडिको सामथ्र्य भनेको हामीमा निहीत साहित्य अनुराग नै रहेछ र त्यसले अहिले सम्म पनि तानिरहेछ । मान्छेका जीवनमा विभिन्न पहलुहरु हुन्छन्, जो जानेर बुँझेर कहिल्यै समाप्त हुँदैनन् । त्यसैले पनि हामीले त्यो साँझ केवल आफ्नो साहित्य अनुरागलाई मात्र केन्द्रविन्दु बनायौँ, जसले गर्दा हामी विचको एउटा स्पस्ट र सुन्दर अपनत्वको चीत्र खिच्न सुगम भएको हो । त्यसपछि क्याफेको त्यो टेवलबाट कति साँझहरु चिप्लिएर कहाँ गए कहिले काही स्मृतिमा छचल्किन्छ ।
मैलै उनको त्यो साँझ देखेको कवि व्यक्तित्व भन्दा रुप व्यक्तित्व एक क्षण भंगुर दृष्टिभ्रम रहेछ । त्यो झर्दै गरेको साँझउनको कवि व्यक्तित्वलाई पहिचान गर्नु सायद काफी थिएन । अव त्यस पछिका हाम्रा नियमित बनेका काव्य सरोकारका फाँटहरु तिर जाऔं, जो उक्त साँझबाट झाँगिएर भर्चुवल दुनियामा यसरी संगती खोजिरहेछ । उनलाई एकछिनको लागि आँखामा टाँसेर आकासमा हेर्ने हो भने उनी ‘एक थान अक्षरहरु’ दिएर मधुरो अधुरो ताराहरु जस्तो यसरी टिल्पिलाउँछिन् ।
आफ्नै आँसुको पहिरोमा
बग्दै गइरहेछ देश
यो सन्तप्त समयलाई
यो देशको घाउहरुमा
यो देशको चोटहरुमा
एउटा किताव बनाउनु थियो
तर खोई मेरा फुर्सदहरु ?
तर खोई मेरा हातहरु ?
तिम्रै प्रेमको बीउ छर्न
बाँझो पन्ना भरि
तातो मरुभुमि भरि
देशको नाममा एकथान
अक्षरहरु निफन्नु जरुर थियो”
मैले थाहा पाए सम्मको सत्यतथ्य के हो भने उनी साहित्य अनुरागी हुन् । उनमा कविताको अम्मल छ र त यी यस्ता सिर्जनाहरु धारा प्रवाह निसृत हुन्छन् । उनी जीवन र जगतको सम्पूर्णतालाई कला र साहित्यले पिइदिएर आरोहण यात्रामा पृथ्वीको कुनै उष्ण ठाउँमा अविछिन्न रुपले हिडिरहेकी छिन् । ज्ञातव्य छ, जीवनसंघर्षको एक लामो श्रृंखला हो । यो आरोही नाम आफैमा एक सौन्दर्य चेतको द्योतक हो । उनले छानेको यो जीवनदर्शनलाई मानवकल्याणको एउटा गतिलो पाइला भन्न रुचाउँछु । आजको मानव सभ्यताले स्वयं मानवको अस्तित्वलाई कुनकित्तामा राखेर जिस्काइरहेछ र कुनदिन एउटा अपगाल निम्त्याउने छ, त्यसको बखान गर्नुपर्दैन होला । अबको यो कुरा साँचो हो, हामीलाई आरोहीमनहरुको सख्त खाँचो छ र हामीले आरोही मनहरु सित हातेमालो गरेर हिड्न सक्नपर्छ ।
उनलाई सामाजिक संरचना र रुपान्तरण जो भनिएको छ, त्यसमाथि नै संशयछ, आक्रोश छ ।
कता हरायो निर्मला?
बगेको रगतको काँचो गन्ध?
दुर्गन्धको कोलाहल छ
ठीक यति बेलानिस्यासिएर स्वयंभू
ओममाने पेमेहुँ.... !”
अकबरी सुनलाई कसीलाउनु पर्दैन । सवैकुरा उनका सरल र सजीव कविताले सटिक पाराले भनि सकेपछि भन्ने कुराहरु केहीपनि रहदैनन् । अहिले म यहि मोडबाट गुज्रिरहेछु । बितेको त्यो एक साँझ, स्र्वणीम साँझ बनेर आँखा अगाडि नाचिरहन्छ ।
नेपाली समाजको आधार स्तम्भहरु, जसले त्यसको मूल्य मान्यताको मानक बोकेको हुन्छ, त्यो यति दु्रतगतिमा क्षयीकरण भएको छ, त्यसको साङ्गोपाङ्लो चित्र खिच्न सायद नेपाली समाजशास्त्रीय सौन्दर्य चेत नै ‘ब्ल्याक आउट’ भएको हो कि जस्तो लाग्छ । कुरो राज्यसत्ता र त्यसको वरिपरि घुमेको कुरुपगरिबी, बेरोजगारी, बिदेश पलायन नै हुन् । यतिका ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन हुनुको नियति खेपिरहँदा कसले र कसको देस विकासको ‘इन्जिनियरिङ’ ले भन्न सक्छ ।
हामी हिडेको गन्तव्य सही र सुरक्षित छ भनेर ? जबकी अहिले दुधमुखे बालकहरु छोडेर विदेश पलायन हुने नारीको संख्याले ‘ग्राफ’उच्चता तिर उक्लिरहेछ । इमान्दार भएर भन्नुपर्दा ‘आरोहीमादेन’को काव्यचेत, साधना र संघर्षको प्रसंगले उठाएका मुद्दाहरु नै हुन् यी । जो मेरो अन्र्तमनमा उलिरहन्छन् । मैले यसरी लेखिरहँदा विरेचन महशुष भएको छ र यो सामाजिक चोसोको विषय हो भन्ने पनि ठानेको छु ।
अबफेरी ‘आरोहीमादेन’कै रचनातिरै जाऔं । उनले नेपाली समाजको विकृति, विसंगतिलाई सारै मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेकी छिन्–
यो मानवता हराएको
गिद्धको सहर हो
जहाँ सत्य बेचेर
यो हुलियाविनाको मान्छे विचरा
कहिले उडेर तिर्दाे हो
साहुको ऋण !
यो इमानदारिता बेचेर
कहिले पुरा गर्ला अभावग्रस्त
‘आरोहीमादेन’ले कविता विधा नै किन छानिन ? सायद उनलाई लागेको हुनुपर्छ, कविताले आफ्नो जबरजस्त सशक्तता दिन सक्छ, एक छोटो सुनाइमा, एक छोटो पढाइमा यदि भन्दाभन्दै उनको कविता लेखनको एउटा विशेषता छर्लङ्ग हुन्छ, त्यो हो, मान्छे आफू कलिलै भएपनि एउटा सामाजिक जिम्मेवारीको प्रौढ चेतना, जसको डुंगामा सयर गर्दै उनी टाढा टाढाकतै अनन्तमा पुग्छिन् । उनका प्रेमिलभाव बोकेका कविताहरु ह्दयस्पर्शी छन्–
छातीमा बयेली खेल्छ
भर्जिन घामको किरण
हो त्यसरी आयौ तिमी
सपनाहरुको पहाड आरोहण गर्ने आरोही एकैछिनमा बादलको घुम्टोले आफ्ना सुन्दर अनुहार छेक्दै उच्छवासको नागीहरुमा पुग्छिन्, तकहिले वेंसीका समथर फाँटहरुमा ।
“यो महादुःखहरुको यात्रामा
तिमी छाँया बन्यौ
र जोगिंए म ढल्नबाट
र सग्लो बने टुक्राहरुबाट
मुक्तभएको हुनुपर्छ ।”
म वास्तवमा व्यक्तिगत रुपमायी स्रष्टाका धनीलाई चिन्दिन । तर यीनको सिर्जनाधर्मीताले तानीरहन्छ । सायद यही चिनारी र सम्बन्ध काफी छ होला । उनी मलाई श्रद्धाले ‘सर’ भन्छिन् । म सर हुँदै सर्दै सर्दै फेरी उही त्यही ढल्दै गरेको साँझमा पुग्छु । बरु गुड भयो, चेलाचिनी भएर रहनू । सभ्याताको यति सुन्दर क्रमलाई मैले आफैले हिडेको गोरेटोबाट फर्किएर हेरें... आहा... त्यो स्र्वर्णीम साँझ...!